'Valentine’s Day’ မွာ တစ္ကုိယ္တည္း ျဖတ္သန္းရသူေတြရဲ႕ အက်င့္စရုိက္မ်ား
‘Valentine’s Day’ မွာ တစ္ကုိယ္တည္း ျဖတ္သန္းရသူေတြရဲ႕ အက်င့္စရုိက္မ်ား
13 Feb 2018 . 4:32 PM
အင္း ‘Valentine’s Day’ ဆုိတာ Single ေတြအတြက္ မၾကားခ်င္ဆုံးေန႔ပဲ။ အခ်စ္ဆုိတဲ့ စကားလုံးကုိ ကုိယ္နဲ႔မဆုိင္သလုိ တစ္ႏွစ္လုံးေနတုန္းက အေကာင္း၊ ‘ခ်စ္သူမ်ားေန႔’ ေရာက္ခါမွ ေလွာင္စရာကုိ ျဖစ္ကုန္ေရာ။ ဒါေပမယ့္ ဂရုစုိက္စရာေတာ့ မလုိပါဘူး။ တကယ္ေတာ့ Singleဆုိတာ ခက္ခဲလွတဲ့ ေပ်ာ္စရာေကာင္းလွတဲ့ ေလာကစည္းစိမ္ကုိ ဘယ္သူ႕မွဂရုစုိက္စရာမလုိဘဲ တစ္ကုိယ္ေတာ္ျဖတ္သန္းေနၾကတာပါ။ သြားခ်င္တဲ့ေနရာကုိ ဘယ္သူ႕မွခြင့္ေတာင္းစရာမလုိတဲ့ Single ဘဝကုိ ဘာျဖစ္လုိ႔ ဝင္ေရာက္ၾကတာလဲဆုိတာ Single အေပါင္းသူေတာ္ေကာင္းေတြကုိ စစ္တမ္းေကာက္ၿပီးတဲ့ေနာက္မွာေတာ့ . . ။
ျဗဟၼျပည္က ဆင္းလာတဲ့ FA စစ္စစ္သမားေတြက Single အသုိင္းအဝုိင္းမွာဆုိရင္ ဂုဏ္သိကၡာအရွိဆုံးလူတန္းစားပါ။ မိဘေတြက ဘယ္လုိပဲတုိက္တြန္းပါေစဦး၊ FA သမားေတြက ဆန္႔က်င္ဘက္လိင္ကုိ စိတ္ဝင္စားလုိ႔ကုိ မရတာ။ FA သမားေတြဆုိတာက လက္ဖက္ရည္ဆုိင္ထုိင္ရင္ေတာင္ စမူဆာကုိ မစားဘဲနဲ႔ အီၾကာေကြးကုိပဲ က်စ္က်စ္ပါေအာင္ ဆုပ္ထားတဲ့လူမ်ိဳး။
Single ေတြကုိေတာ့ အေသးစိတ္အမ်ိဳးအစားခြဲၿပီး ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ အခုေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ (၇) ေယာက္ကေတာ့ ‘Valentine’s Day’ မွာ တစ္ေယာက္တည္းျဖတ္သန္းရဦးမွာပါ။
‘Valentine’s Day’ မှာ တစ်ကိုယ်တည်း ဖြတ်သန်းရသူတွေရဲ့ အကျင့်စရိုက်များ
အင်း ‘Valentine’s Day’ ဆိုတာ Single တွေအတွက် မကြားချင်ဆုံးနေ့ပဲ။ အချစ်ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို ကိုယ်နဲ့မဆိုင်သလို တစ်နှစ်လုံးနေတုန်းက အကောင်း၊ ‘ချစ်သူများနေ့’ ရောက်ခါမှ လှောင်စရာကို ဖြစ်ကုန်ရော။ ဒါပေမယ့် ဂရုစိုက်စရာတော့ မလိုပါဘူး။ တကယ်တော့ Singleဆိုတာ ခက်ခဲလှတဲ့ ပျော်စရာကောင်းလှတဲ့ လောကစည်းစိမ်ကို ဘယ်သူ့မှဂရုစိုက်စရာမလိုဘဲ တစ်ကိုယ်တော်ဖြတ်သန်းနေကြတာပါ။ သွားချင်တဲ့နေရာကို ဘယ်သူ့မှခွင့်တောင်းစရာမလိုတဲ့ Single ဘဝကို ဘာဖြစ်လို့ ဝင်ရောက်ကြတာလဲဆိုတာ Single အပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေကို စစ်တမ်းကောက်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ . . ။
တချို့ Single တွေကျတော့ Facebook မှာဖြစ်ဖြစ်၊ Viber မှာပဲဖြစ်ဖြစ် တွေ့ရင် ဖွန်ကြောင်မယ်၊ ဒါပေမယ့် ရည်းစားမထားချင်ဘူး။ သူ့အနေနဲ့ ရည်းစားထားဖို့ထက် အီစီကလီပြောရတာကို ပိုအားသန်လို့ပါ။ ဒီလို Single တွေကတော့ ဒုနဲ့ဒေးရှိပါတယ်။
သူကတော့ ဘာမှနားမလည်ခင်က ရည်းစားတွေ ထားခဲ့ဖူးတယ်။ နားလည်လာတော့ အချစ်မပါတဲ့ Relationship တစ်ခုကို ဆက်မတွဲချင်တော့ဘူးလို့ ခံယူပြီး တစ်ယောက်တည်းအေးဆေးနေတော့တာ။ ဒီလို Single က အချစ်စစ်ကို စောင့်နေတဲ့ Single ဗျ။ တချို့တွေကလည်း ဘွဲ့မရသေးရင်၊ လိုချင်တဲ့ပန်းတိုင်မရောက်သေးရင် ရည်းစားသနာမထားချင်တဲ့သဘောပါ။ ရည်မှန်းချက်ကြီးတာလား ဘာလားတော့မသိ။
ဒီ Single ဘဝကတော့ သနားစရာကောင်းပါတယ်။ ကိုယ်စိတ်ဝင်စားလို့ ချိန်မယ်ကြံခါရှိသေး၊ တခြားသူနောက် ကောင်မလေးက ပါသွားပြီ။ အာ့ကြောင့် သူ့ကို “ချိန်ပါ” လို့ခေါ်တယ်။ ချိန်လိုက်တိုင်း ပါသွားလိုက် လုံးလည်လိုက်နေရင်းနဲ့ Single ဘဝမှာ သောင်တင်နေတာပေါ့။
ပိုးဟပ်ကတော့ ချိန်ပါထက် နည်းနည်းမြင့်တယ်။ ကိုယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့ ကောင်မလေးကို အမှန်အကန်လိုက်နေပြီ၊ ကောင်မလေးနဲ့ ညဘက်ဆို ဖုန်းတွေပြောလိုက်၊ အပြင်မှာ မုန့်ထွက်စားလိုက်နဲ့ ကိုယ်ပိုးနေတုန်းမှာ တခြားတစ်ကောင်က ဟပ်သွားလို့ သူ့ကို ပိုးဟပ်လို့ခေါ်တာ။ ပိုးလိုက်တိုင်း အဟပ်ခံလိုက်ရတိုင်းနဲ့ Single ဖြစ်နေတာ။
ဒီလိုကောင်တွေက Single ဘဝသာ ရောက်နေတာ ခေသူမဟုတ်ဖူး။ ဓာတ်တိုင်ကိုတောင် ထဘီဝတ်ပေးရင် တောင့်တယ်ဖြောင့်တယ်ပြောကြတဲ့ ငယ်ဖြူနှာပူးတွေပါ။ သူတို့က နားပူမခံချင်လို့ အပြင်မှာ ရည်းစားမထားဘူး၊ ပိုက်ဆံသိန်း ၃ဝရှိရင် စီလီကွန်ရုပ်ပဲ ဝယ်မယ့်သဘော။ ပန်းဆယ်မျိုးမှာမပါတဲ့ လက်သမားတွေပေါ့ဗျာ။
“အပျိုကြီး . . . တကယ်လုပ်မှာလား ပြောစမ်းပါ၊ ရည်ရွယ်တဲ့ မင်းအကြောင်းကို တကယ်လို့မင်းနဲ့ မပေါင်းဖြစ်ရင်တော့ အားကျမခံ လူပျိုကြီးပဲ လုပ်တော့မယ်” ဆိုတဲ့ သီချင်းလိုပဲ တကယ်ချစ်ရတဲ့သူနဲ့ ကွဲခဲ့လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မရခဲ့လို့ပဲဖြစ်ဖြစ် အချစ်သစ်မရှာချင်တာနဲ့ တစ်ယောက်တည်းအေးဆေးနေတော့တာပါ။
၇။ FA စစ်စစ်
ဗြဟ္မပြည်က ဆင်းလာတဲ့ FA စစ်စစ်သမားတွေက Single အသိုင်းအဝိုင်းမှာဆိုရင် ဂုဏ်သိက္ခာအရှိဆုံးလူတန်းစားပါ။ မိဘတွေက ဘယ်လိုပဲတိုက်တွန်းပါစေဦး၊ FA သမားတွေက ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်ကို စိတ်ဝင်စားလို့ကို မရတာ။ FA သမားတွေဆိုတာက လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထိုင်ရင်တောင် စမူဆာကို မစားဘဲနဲ့ အီကြာကွေးကိုပဲ ကျစ်ကျစ်ပါအောင် ဆုပ်ထားတဲ့လူမျိုး။
Single တွေကိုတော့ အသေးစိတ်အမျိုးအစားခွဲပြီး ဖော်ပြခဲ့ပြီးပါပြီ။ အခုဖော်ပြခဲ့တဲ့ (၇) ယောက်ကတော့ ‘Valentine’s Day’ မှာ တစ်ယောက်တည်းဖြတ်သန်းရဦးမှာပါ။